Nokia က Lumia 2520 Tablet ကိုထုတ်ဖော်ပြသ ~ The ICT.com.mm Blog
Nokia က Lumia 2520 Tablet ကိုထုတ်ဖော်ပြသ
ဒီနေ့ Abu Dhabi မှာပြုလုပ်တဲ့ Nokia ရဲ့ပွဲ မှာ Lumia 2520 ကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပါတယ်။Nokia ရဲ့ ပထမဆုံး Tablet ဖြစ်ပြီး Windows RT 8.1 ကိုမောင်းနှင်အသုံးပြုမှာမှာဖြစ်ပြီး $499 နဲ့ ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာရောင်းချမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပထမဆုံးရောင်းချမယ့်နိုင်ငံတွေကတော့ US,UK,Finland နဲ့တစ်ချို့နိုင်ငံတွေကိုတော့ နောက်ပိုင်းကြေညာမယ်လို့ပြောပါတယ်။
Lumia 2520 ဟာ 10.1 လက်မ အရွယ်အစားရှိပြီး 1080p HD Display ပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Outdoor , Indoor ပါသုံးလို့ရအောင် ဒီဇီုင်း ပြုလုပ်ပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Power Keyboard လည်းပါရှိမှာပါရှိမှာဖြစ်ပြီး Function များစွာသုံးလို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။Gesture Trackpad လည်းပါရှိပြီး Battery ငါးနာရီ အသုံးခံမယ်ပြောပါတယ်။ USB Port နှစ်ခုပါရှိပါမယ်။ လျှင်မြန်တဲ့ အားသွင်းစနစ်ပါရှိပြီး တစ်နာရီကို ရှစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်းအားသွင်းပေးနိင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ် Tablet တော်တော်များများဟာ Wi-Fi Model နဲ့ Wi-Fi + LTE Model ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပေမယ့် Nokia Tablet ကတော့ 4G LTE + Wi-Fi နှစ်မျိုးလုံးပါရှိမှာပါ။ Windows RT ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တာကြောင့် Microsoft Office , Outlook တို့ကိုအဆင်သင့်ပါရှိလာမှာပါ။
ဒီ Tablet မှာ ဓါတ်ပုံအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ထားတာဖြစ်ပြီး 6.7 megapixel camera , ZEISS optics တို့ပါရှိပါမယ်။ဒါ့အပြင်အနောက်ကင်မရာ အနေနဲ့ 2MP HD Wide-Angle Camera လည်းပါရှိမှာပါ။
Nokia Lumia 2520 မှာ HERE Map ပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Offline Map ကိုပထမဆုံးသုံးလို့ရတဲ့ Tablet ပါလို့လည်းပြောပါတယ်။
ဒါကတော့ Lumia 2520 ရဲ့ Specification တွေဖြစ်ပါတယ်။
Nokia Music for unlimited streaming of ad-free music.
Free global HERE Maps.
Microsoft Office built-in.
8000 mAh (integrated).
Red, White (glossy), Cyan, Black (matte).
Specifications တွေကိုပဲသိရှိရသေးပြီး ရောင်းချမယ့်ရက်ကိုတော့ သေချာမသိသေးပါ။
Newer Nokia က Lumia 1520 , Lumia 1320 ဖုန်းနှစ်လုံးကိုထုတ်ဖော်ပြသ
Older ၂၀၇၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ကြီးရှိ တော့မည်မဟုတ်ဟု ဒေါက်တာထွန်းလွင်ပြော